Iindaba - Iprojekthi yombhobho wegesi ye-East China Russia iqala ukusuka kumda we-Sino Russian kwisiXeko sase-Heihe, kwiPhondo lase-Heilongjiang.
Iprojekthi yePayipi yeNdawo ye-Sino-Russian East Route iqala kumda we-Sino-Russian kwiSixeko sase-Heihe, kwiPhondo lase-Heilongjiang kwaye iphele eShanghai. Ziikhilomitha ezingama-5,111 ubude. Yahlulwe yangamacandelo amathathu okuvunywa nokwakhiwa ngezigaba. Phakathi kwabo, icandelo elingasemantla kunye necandelo eliphakathi le-XCMG XZ13600 yecala lokukhomba ulungelelwaniso lwendlela yokugalela yenziwe ukuba isebenze ngo-2019 nasekupheleni kuka-2020 ngokwahlukeneyo.
Ukuwela kweCandelo elitsha laseFuyang laseHengshui yindawo yokuqala yokugrumba kwicandelo elisemazantsi eSino-Russian East Route ukwakhiwa kwemibhobho yegesi yendalo! Umbhobho wokutsala unobubanzi be-1219mm kunye nobude be-1272m. Inobubanzi obukhulu kunye nomgama omde. Umsebenzi kaMnumzana Zhang awungomsebenzi omkhulu nje, kodwa unentsingiselo ebalulekileyo yokuqalisa idabi lokuqala kunye nokufumana isiqalo esihle!
Isiteyitimenti sokuphinda sisebenze esizeni ubukhulu becala ngumhlaba oyintlenga kunye nodongwe lwesilt. Ngokwabasebenzi bokwakha kwisiza, ulwakhiwo lweXCMG XZ11000 luthatha imibhobho emithathu okanye emine yokugrumba ngeyure ngokukhawuleza, kunye nombhobho omnye wokugrumba ngokukhawuleza kwimizuzu emi-5; Amandla okutsala uninzi xa urhuqa umva. Malunga neetoni ezingama-300, umbhobho wokurhuqa unobubanzi obuyi-1219mm kunye nobude obuyi-1272m, kwaye kuthatha iiyure ezili-18 zizonke iiyure ezili-18.
Ukuthatha inxaxheba kulwakhiwo lwe-Sino-Russian East Route imibhobho yegesi yinkonzo yokuqala ye-XCMG XZ11000. Zithini ezona zinto zibalulekileyo?
Ukusebenza okuphezulu kukuvuma, eyona nto ibalulekileyo kukukhathalela. Inqaku lokuqala lobungqina "obusondeleyo" bentsimbi: uqoqosho lwamafutha. I-XZ11000 ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo i-enjini ezimbini zokwakha ngaxeshanye, ezigcina umndilili wama-600L wombane ngosuku. Ngokwamaxabiso eoyile yangoku, i-3,000 yuan ngemini. Ungathenga indlu ye-1 yemitha yesikwere eXuzhou ngamafutha agciniweyo kwiintsuku ezimbini okanye ezintathu. Ulwakhiwo olupheleleyo lweli candelo lokuwela Kwiintsuku ezingama-40, zingaphi izikwere zezindlu ezakhelwe uMnu. UZhang?
Eyiyo. Kwingqokelela yomngxuma wasekhaya, i-XCMG ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo sokugrumba ngokusebenza kakuhle kunye nesantya esiphezulu se-32m ngomzuzu. Kuqikelelwa ukuba ixesha lokwakha leenyanga ezi-2 linokugqitywa kwiintsuku ezingama-40. I-XCMG XZ11000 ilungile ngokwenene njenge "yokugaya"!
Ngaphandle kwexhala. Ngaphezulu kweentsuku ezingama-40 zeprojekthi, i-XCMG XZ11000 ethe tyaba yomkhombe wokugumba isixhobo sasingenangxaki kuyo yonke le nkqubo, kwaye itekhnoloji ye-XCMG, iinkosi zobunjineli kunye neqela lesiqinisekiso senkonzo elalikhapha yonke inkqubo. Abasebenzisi banokuqiniseka ngokusebenza kwezinye iiprojekthi ngaphandle kokukhathazeka malunga nazo!
Umatshini weDth Rig, imfumba yokomba isixhobo, Umatshini wokugrumba amaqula, Umatshini wokugoba amanzi amancinci,